Tenga 36V 350W Electric Road Bike | ebike Shuangye
musha Products electric bike motokari yemugwagwa 36V 350W yemagetsi bhasikoro yemagetsi 160 hydraulic disc brake
Mota: 250w / 350w isina brushless mota
Bhatiri: 36v 8ah / 9.6ah yakavanzwa bhatiri
Kukurumidza Kukurumidza: 30 - 45km / h
Mota Range: 40-60 km
Max Mutoro: 80-120 makirogiramu
Kutengesa nguva: 7-8 maawa
Gear: Shimano 7/9/21/27 magiya
Akaputsa System: 160mm hydraulic disc akamedura
Kubvunda: Thumb throttle
An motokari yemugwagwa inogona kuita kuti vatasvi vatasve nekukurumidza uye nekuwedzera kushoma. Uye iyi mabhasikoro emugwagwa anorerutsa mutoro pane yako inotevera yekufamba kana yeboka kukwira. Iyi yemagetsi bhasikoro yemigwagwa nezve kushanda uye kushandiswa inopa imwe nzira kune dzimwe nzira dzekutakura. 700C mataire emota emabhasikoro emigwagwa, maviri rding modhi - Pedal Assist uye Throttle Assist. Nakidzwa nekumhanyisa uye kunakidza kuchovha nemigwagwa mabhasikoro munzira yakatetepa.
Imotokari ye250w kana 350w yakaiswa pane vhiri remagetsi bhasikoro rekuseri vhiri kuti riwedzere kufambisa, zviri nyore kusvika padanho rakakura 25-32km / h. Kunyangwe kana uri munzira yemakomo ine makomo, nzira dzakakombama kana mugwagwa wakadzika, bhasikoro remagetsi emakomo ne250w / 350w mota yemagetsi inogara ichipa simba rakaringana kune vatasvi kuti vasangane nezvinodiwa nemabhasikoro.
36v yakavanzwa lithiamu bhatiri inoita iyi yemagetsi bhasikoro yemigwagwa inogona kuchovha 40-60km max renji pane imwechete mubhadharo. Uye ingori 5-7 maawa anogona kupedzisa kubhadharisa kuzere.
Chiratidziro cheLCD chiri pakati pebhari yekubata kuunza yakanakisa yekuona maitiro kune vatasvi Kunze kwe5-level PAS uye yekumberi mwenje chiratidzo, kune mamwezve data eakanakisa emagetsi makomo bhasikoro, semuenzaniso, mota simba, gara bhatiri, yakazara rwendo, tembiricha, max kumhanya uye nezvimwe. Iyo zvakare ine isina chinhu ficha, kunyangwe kana kuchinaya, hautye mvura inopinda mukati nekukuvadza iyo kuratidzwa.
Ose kumberi neshure vhiri vanoshandisa iyo 160 hydraulic disc brake system, kunyangwe mune yakanyorovera kana kutonhora mamiriro ekunze kana mamiriro ekukurumidzira, inogona kupa pakarepo braking simba. Uye shandisa yakakurumidza kuburitsa marongero pamberi pevhiri, zviri nyore kubvisa vhiri repamberi kana uchida. Kunewo michina dhisiki akamedura anogona kusarudzwa.
Kana iwe uchifarira mamwe emagetsi emigwagwa emabhasikoro, shanya vhiri rakasimba road electric bike, 18 kumhanyisa mugwagwa ebhasikoro, mechanical disc brake mugwagwa e-bhasikoro
Tags:mabhasikoro emugwagwa 350W mugwagwa ebike
Prev: 700C yakasimba matabha emagetsi emagetsi mabhureki A6-R
Next: Nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro emagetsi 700C * 35C
700C yakasimba matabha emagetsi emagetsi mabhureki A6-R